Wararka - Wararka shirkadda - Martida Kuuriyada Koonfureed waxay xaqiijinayaan heshiiska basasha ee NCG
Wararka shirkadda - Martida Kuuriyada Koonfureed waxay xaqiijinayaan heshiiska basasha ee NCG
Bishii Janaayo 21st, hal koox oo ka ganacsada soo dhoofinta cuntada Kuuriyada Koofureed ayaa u timid NCG si ay goobta ganacsiga ugu xirtaan oo ay si qoto dheer uga wada hadleen tayada wax soo saarka, heerarka dhoofinta, amarrada iyo keenista. Ganacsatada Kuuriyada Koonfureed waxay soo mareen shirkad madaxbanaan oo loo yaqaan 'NCG' oo u gaar ah xudduudda ganacsiga e-commerce si ay u bartaan wax soo saarka beeraha oo tayo sare leh oo la xiriira, lana xiriir NCG dhowr jeer si ay uga wada hadlaan midba midka kale heshiisyada, labada dhinacba waxay la socdaan dabeecad saaxiibtinimo, iyagoo ujeedkoodu yahay iskaashi faa'iido, is aaminaad, aakhirka, amarka hal mar ee ah 14 koontiinar, ayaa lagu dhammaystirayaa 300 oo tan oo ah dhoofinta wax soo saarka beeraha.
Dood-cilmiyeedka, waxaan inta badan si faahfaahsan ugu sharraxnay heerarka tayada ee wax soo saarka beeraha ee tayada sare leh ee Anqiu, saadka iyo gaarsiinta iyo arrimaha kale ee la xiriira, si buuxda iyadoo la raacayo gaarsiinta baahida macaamiisha. Iyada oo loo marayo bandhigga barxadda, waxaan sii wadeynaa xiriir qoto dheer oo ku saabsan hawlgallada dibedda ee barxadda, dejinta madal, bixinta alaabooyinka iyo arrimo kale, si buuxda u muujinaya faa'iidooyinka adeegga hufan iyo amar bixinta fudud ee barxadda ganacsiga e-ganacsiga ee NCG.
Martida Kuuriya waxay si aad ah uga hadleen qaabka hawlgalka ee barxadda ganacsiga e-commerce ee xudduudaha xudduudaha ka ah. Isla mar ahaantaana, waxay muujiyeen rajada ah in la ilaaliyo xiriirka muddada-dheer ee NCG oo ay aasaas u dhigaan iskaashi iyo is-dhaafsi dheeri ah mustaqbalka. Wadashaqeyntani waxay si buuxda u muujineysaa faa'iidooyinka NCG ee ka ganacsiga xudduudaha e-commerce. Iyada oo loo marayo Internetka, Macluumaadka Weyn iyo tikniyoolajiyadaha kale ee casriga ah, dhoofinta wax soo saarka beeraha ayaa si firfircoon kor loogu qaadi doonaa si loo gaaro casriyeyn hore u-socod ah. E-commerce-xuduudaha ayaa sii wadi doonta inay ku darto xawaare cusub ganacsiga caalamiga ah ee wax soo saarka beeraha.